Fanadinam-panjakana: Nofoanana dia haverina! | Hevitra MPANOHARIANA
Fanadinam-panjakana: Nofoanana dia haverina!
2008-01-29 @ 07:17 in Ankapobeny
Itony vaovao itony dia nanana ny lazany tamin'ny fotoan'andro nandehanan'ny karajia. Na dia mba miezaka ny hampahalala ny antsipiram-baovao aza ny mpihaino any amin'ny kidaona maraina, hany sisa azo iresahana dia tsy hahenoana valiny sady tsy misy manampy rahateo, resaka kivalavala vianinany ihany no tena renao any.
Tany ho any amin'ny tapak'ity volana ity no nahenoana fa naverina ny fifaninanana hidirana ho mpiasam-panjakana any amin'ny minisiteran'ny tetibola (Sampandraharaha ankapobeny momba ny hetra). Ny antony tsotra nolazaina dia nisy zavatra tsy ara-dalàna. Raha nomanina manko ity fanadinana ity dia nolazaina fa hatao mangarahara ity fanadinam-panjakana notontosaina tamin'ny tapaky ny volana desambra ity. Hanara-maso akaiky ny fanadinana manokana ny Bianco sy ny resaka hafa toy izany. Dia io fa haverina hoe.
Lasa amin'izay ny tombatomban'ny olona hoe nisy nahita "sujet" ve? sa nisy inona tokoa? Raha mbola eto ampiakarakarana azy talohan'ny tapaky ny volana desambra manko dia nolazaina fa tsy hisy hahita mialoha ny laza adina izany. Mipetraka anaty kapila mangirana misy fanalahidy manko araka ny filazany ka ora iray mialoha ny fanombohan'ny fitsapana vao atonta printy ny laza adina. Ny fanalahidy moa dia ny ao amin'ny foibe mihitsy no mamoaka azy vao mety misokatra.
Dia tsahotsaho sisa, satria tsy hamoaka fanavazavana amin'ny antsipiriany mihitsy ny ao amin'ny fitondrana na dia notadiavin'ny maro aza izany, no nahenoana hoe nisy nampifamadibadika hoe ny anarana sy ny taratasy nosoratan'ny mpiadina nokasaina hahaafaka ny "namana" sasany kanjo tratra izany kinasa izany. Dia izay hoe no antony!!! tsy ofisialy. Manana namana mpamaham-bolongana ao amin'ny minisiteran'ny vola sy ny tetibola isika saingy tsy hanery azy hamoaka ny fantany sady mety tsy ho hitany rahateo izao lahatsoratro izao.
ra vao resaka fanjakana mihitsy dia any tsy falehany foana ny zvt e! tsy atao mahagaga fa idiran'ny resaka politika foana ny zvt any
Nampidirin'i news2dago @ 17:28, 2008-01-29 [Valio]